टिक-टक बनाउने भन्दै सेती नदीमा पसिन ? संगै गएका साथीले खोले सबै कुरा-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित ) – Kavrepati
Home / समाचार / टिक-टक बनाउने भन्दै सेती नदीमा पसिन ? संगै गएका साथीले खोले सबै कुरा-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )
admin September 17, 2021	समाचार Leaveacomment 89 Views
काठमाडौँ । तनहुँको शुक्लागण्डक नगरपालिकामा पर्ने रक गार्डेनमा रहेको सेती नदीमा टिकटक बनाउन खोज्दा ५ दिन अगाडि मात्रै हरि सिक्देलसंग बिहे गरेकी पवित्रा लम्सालको मृत्यु भएको छ । आफ्ना दुईजना साथीहरूसँग टिकटक बनाउन भनेर सेतीको रक गार्डेन भन्ने ठाउँमा जब टिकटक बनाउन लागिन् तब उनलाई सेती खोलाले बगाएर लगेको हो। ५ दिन अघिमात्र बिहे गरेकी उनी दुलान फर्काउन भनेर घर आएकी थिइन् र टिकटक भिडियो बनाउन खोला जाँदा उनको त्यहीँ मृत्यु भएको छ ।
साथीहरूको अनुसार पवित्रालाई भेट्न भनी उनको देवर आएको र देवरलाई भेटेपछि उनीहरु फेरि रक गार्डेनमा गएर फोटो खिच्न गएका थिए । त्यसपछि पवित्रा खोला नजिक गएको र पवित्रा आफै हा ‘म्फा’लेको हो या खोलाले ब गाएको हो उनीहरुलाई थाहा नभएको बताए । ­भिडियो
Previous इन्टरनेटको शुल्क प्रति–महिना तीन सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय
Next कहाँबाट आयो कक्षा ६ मा पढ्ने यि दुई बालकको खातामा करोडौँ भारु ? त्यो के गरे झनै रोचक !